China Caravan umhambisa ibhetri LAXpower-1230 12V 30Ah LiFePO4 ibhetri pack kunye kwitshaja eyakhelwe-ngaphakathi kunye SOC yoMvelisi kunye noMthengisi | LIAO
Ikharavani eshukumayo ibhetri LAXpower-1230 12V 30Ah LiFePO4 ibhetri ephethe itshaja eyakhelweyo kunye ne-SOC
China umenzi 19 intshi yokubeka ezifuna 48V 50Ah lithium ion ibhetri (LiFePO4zonxibelelwano
I-Abs casing 2000+ imijikelezo yobomi be-lithium ion ibhetri eyi-12V 100Ah ene-BMS
Uhlobo lweBolt prismatic 3.2V 10Ah LiFePO4 iseli yebhetri yokuhambisa umbane kunye nokugcina amandla
I-SOC kunye nesiphatho kubandakanya i-36V 40Ah LiFePO4 ibhetri yepakethe yesikuta sombane / isithuthuthu / imoto ebusayo
Intengiso eshushu yokubonelela ngombane ngokusebenza okuphezulu kunye nokukhutshelwa kwe-AC kunye neDC
1. Ubungakanani be-ABS be-12V 30Ah LiFePO4 Ipakethe yebhetri yokuhambisa ikharavani.
2. Amandla agqithisileyo kunye nobunzima bokukhanya kokukhanya.
Umzekelo No. Umgaqo we-LAXpower-1230
Amandla ombane 12V
Amandla okuzimela 30Ah
Ubukhulu. ngoku okuqhubekayo 100A
Okwangoku okwangoku 200A
Incopho yangoku 300A
Ubukhulu. ukutshaja ngoku 2C
Ukutshaja ombane 14.6V
Ukutshaja kwangoku 4A
Igalelo le-AC 100-240V
Charge ubushushu 0 ° C ~ 45 ° C
Ukukhutshwa kobushushu -20 ° C ~ 60 ° C
Ubushushu bokugcina -10 ° C ~ 45 ° C
Ubomi bomjikelo (80% DOD) ＞Amaxesha angama-2000
IP iklasi IP21
Ubukhulu Ubukhulu: 150mm * 275mm * 120mm
Ukusetyenziswa Ukuhamba kweekharavani, unikezelo lwamandla.
3.Ukusetyenziswa okunzulu okude kunye nokhuseleko oluphezulu.
4.Itshaja eyakhelwe-ngaphakathi kunye neqondo lokuzikala elingaphantsi.
5. Inkonzo ende yobomi nad ebalaseleyo.
6. Ezizodwa zenzelwe ukuhamba kweekharavani.
7. Le mveliso ithandwa kakhulu kwimarike ye-EU iminyaka.
Iparameters kunye nesicelo
I-Hangzhou LIAO yimveliso yobungcali ye-LiFePO ye-prismatic4Iiseli zeLithium. Iipakethe zebhetri zihlanganisiwe kusetyenziswa ezi seli. Umzimba osindayo ukhethelwe i-LAXpower-1230 apho iiseli, itshaja kunye nolawulo lwebhetri zibandakanyiwe kwimveliso enye.
Injongo yale bhetri ilula kukunikezela ngesisombululo esifanelekileyo somsebenzisi wekharavani enomthwalo olinganiselweyo we-30 Ah kunye nobunzima obulinganiselweyo. Le bhetri iyakwazi ukuhambisa imisinga ephezulu, inobunzima bokukhanya kwaye ke iyilungele kakuhle le njongo.
Ibhetri inentlawulo engaphezulu kokwenza intshukumo enye yecaravan. Ishukumisi sinokusetyenziswa ukuya kuthi ga kwimizuzu engama-50 ngexesha lokusetyenziswa okunzima (35 Okuqhubekayo). Ukusetyenziswa gwenxa (100 A) ishukumisi sinokusetyenziselwa ukuya kuthi ga kwimizuzu eli-18.
Ukuba yenziwe ixesha elide ibhetri iya kuzicima ngokuzenzekelayo kwaye iya kufuna ukuzicwangcisa kwakhona. Ngenxa yokuba ibhetri yenziwe ngeLithium LiFePO4chemistry, kunokwenzeka ukukhupha ngokupheleleyo ibhetri ngokungafaniyo neebhetri ze-asidi. Nje ukuba ibhetri ingabinanto iya kuzicima kwaye emva koko kuya kufuneka iphinde yenziwe ntsha ukuze iphinde isetyenziswe kwakhona. Ukutshaja kwenzeka ngentambo yetshaja kunxibelelwano oluphambili.
Egqithileyo I-SOC kunye nesiphatho kubandakanya i-36V 40Ah LiFePO4 ibhetri yepakethe yesikuta sombane / isithuthuthu / imoto ebusayo
Okulandelayo: Amandla ombane aphezulu okusebenza okusebenzayo kwe-12V 130Ah LiFePO4 ibhetri yokupakisha ekhaya nakwikharavani
Kwitshaja eyakhelwe-ngaphakathi Ubunzima bokukhanya kwamandla amakhulu e-12V 12Ah LiFePO4 ibhetri yokuhambisa ikharavani
Amandla ombane aphezulu okusebenza okusebenzayo kwe-12V 130Ah LiFePO4 ibhetri yokupakisha ekhaya nakwikharavani